Enwere ike ghara ịrụ ọrụ Samsun Ladik Akdağ Ski Center | RayHaber
HomeTurkeyBlack Sea Region55 SamsunEnwere ike ghara ịrụ ọrụ Samsun Ladik Akdağ Ski Center
Enwere ike ghara ịrụ ọrụ Samsun Ladik Akdağ Ski Center
23 / 09 / 2019 55 Samsun, General, Black Sea Region, Turkey, TELPHER
A gaghị enwe ike iji ike emehe samisi ladik akdag nke ọma
Obodo ukwu nke Samsun, nnukwu obodo mepere emepe nke Oké Osimiri Ojii, ekpebiela itinyekwu ego maka mpaghara na Ladik District, nke nwere nnukwu ọrụ na njem.
Obodo nke obodo Samsun choro itinye ego ndi ozo iji nwekwuo ma zụlite njem nleta na mpaghara Ladik. İlhan Bayram, onye ode akwụkwọ ode akwụkwọ ukwu nke ọchịchị ime obodo, bụ onye duziri nyocha ndị a na mpaghara yana ndị ọrụ gọọmentị etiti na ngalaba nyocha ngalaba nyocha malitere maka ebumnuche a, kwuru:
Mmefu ego maka ngwụcha ngwụcha izu na Ladik Samsun Isi Obodo N'ọnọdụ Ilhan Bayram Ladik Mayor Nurhan Constructor Nkeonwe, Ngalaba Ọchịchị Obodo ukwu nke Metropolitan sokwa ederede Koksal. Ilhan Bayram, Akdag Ski Resort, Ambarkoy, Akpinar Education Museum na Ọdọ Ladik kwuru.
AKPAN AKA NA-AKPỌ AKUKO AKANĞ
Onye odeakwụkwọ ukwu İlhan Bayram, ya na ndị otu ya, bu ụzọ kwupụta na mpaghara Alan Tourism Area nke Minista Maka Ọdịbendị na Nleta. Achọtara na nyocha. Onye isi akwukwo Bayram, onye gara ime ụlọ 29 na ụlọ ebe ihe ndina nke 45 nke Mịnịstrị ndị ntorobịa na egwuregwu butere ma na-emepebeghị maka ọrụ, natara ozi teknụzụ banyere oche oche 100 na oche oche 16 nwere puku puku 84 ogologo ogologo ụzọ.
JIJI, MAKA AHAFMAT AND NA AKAFKỌ…
N’enye ohere inweta ihe owuwu a tupu oge udu mmiri, a na-arụzi ụzọ ogologo ogologo kilomita nke 7 ma bụrụkwa onye odeakwụkwọ odeakwụkwọ İlhan Bayram na-ezizi, “Anyị ga-eme ihe ọ bụla a chọrọ iji mee ka akụrụngwa ndị a dị oke mkpa maka njem. Anyi bu n’obi na anyi ga - ejide ihe Akdağ Skiing Facility n'ozuzu ya obughi na oge oyi kamakwa na udu mmiri ”.
'NA-EWUTE N’ DBỌ N’ NOBỌCH' ’
Mgbe njem obodo Ilhan Bayram gasịrị, ógbè ndị siri ike nke Ladik nyochara ọrụ nke parquet ụzọ. Bayram gere ntị na nsogbu ụmụ amaala na-akparịta ụka site na isoro mkparịta ụka, “isoro anyị na mpaghara district anyị atụpụtawo ọrụ dị mma. A ga-arụcha ụzọ na paịlị n'ime obere oge ma ọ ga-abụ ọrụ gị. ” Onye odeakwụkwọ ukwu Bayram nyere ozi ọma na nnukwu ọnụ ụlọ agbamakwụkwọ ahụ, nke a hapụrụ, ga-agwụ ma meghee ya n'oge na-adịghị anya.
Secretary General İlhan Bayram na onye isi Ngalaba Sayensị Metin Köksal kwagara na Havza District mgbe mmemme ha gachara na Ladik.
A ga-agbatị Xilek 10 maka Ankaray Mamak
Na-aga New Era na Ụgbọ njem na İzmir
Na njedebe nke MCBU Muradiye Campus
Ihe omume Michelin ‘Right Press Press’ bidoro
Ụzọ ziri ezi maka Nchedo okporo ụzọ
Samsun Ladik Akdag Ski Resort
Obodo ukwu nke Samsun
Njem a na-agba ịnyịnya na Kayseri dọtara mmasị dị ukwuu